HomeChampions LeagueBale: Waa sababtan Ta Aan Ku Doortay Inaan Kamid Noqdo Real Madrid
Gareth Bale ayaa sheegay xasuuqii Real Madrid ay 4-0 ka kaga dul booday Bayern Munich Khamiistii xallay inay daaha ka fayday Inuu ku saxsanaa inuu kamid noqdo “kooxda ugu awooda badan aduunka” xagaagii tagay.
“Natiijo qaali ah ayay noo tahay anaga ,” ayuu xawaare jaraha reer Scotland ku yidhi telefishanka ITV .
“Waxay ila tahay waxaanu u shaqaynay si adag, farsamadayadii ayaanu si fiican u dabaqnay, ciyaartii caawana ‘xallay’ waxaanu soo bandhignay awood waanan u qalmaynay guusha.
“Waxaan qiyaasayaa inay ciyaarayeen iyagoo gacantayada ku jira. Waxay inta badan noo firaaqaynayeen fursado aanu weeraro degdeg ah ku qaadi karno. taasi oo ah ta aanu doonaynay. Waxaanu haysanaa ciyaaryahano degdeg ku ciyaara oo orod dheer, waxayna ahayd inaanu taas ka faa’iidaysano. Qaab ciyaareed heersare ah ayaanu soo bandhignay, waanan ku faraxsanahay inaanu imika Finel taaganahay. laakiin wali hal talaabo ayaa noo dhiman.
“Tani waa sababta dhabta ah ee aan ugu soo biiray Madrid. Waana sababta aan u doonayay inaan imaado kooxda ugu awooda badan aduunka. Si aan koobab ugu guulaysto, ciyaaraha ad adag aan ku guulaysto. Wali koobkii maanaan qaadin, waa inaan ciyaar adag la shir nimaadnaa kulanka gunaanadka kooxdii doontaa hanaguu soo baxdee horu socod baanu ku jirnaa.”